Madaxweyne Gaas oo ka warramay Xaaladda degmada Qandala oo galabta uu tegay.[Dhagayso]
Qandala:-Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamad Cali Gaas iyo Wafdi uu hogaminayo ayaa galabta gaaray degmada Qandala ee gobolka Bari. Wafdiga Madaxweynaha ayaa waxaa ay doonyo ka raaceen magaalada xeebta ah ee Boosaaso waxaan socdaalka ku weheliyey ciidamada Badda Puntland ee PMPF.
Wafdiga Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamad Cali Gaas ayaa safarkiisa degmada Qandala waxaa uu qaatay 3 saacadood waxaan ay kormeer ku tageen xarumihii dowladda oo dhamaan ay burburiyeen kooxdii Daacish oo mudo ilaa 40 cisho ku sugnaa magaalada Qandala.
Magaalada Qandala ayaa ah magaalo taariikhi ah waxaan dagaalo goos goos ku dhexmareen ciidamada Puntland kooxda Daacish oo markii danbe laga saaray degmada Qandala ee Gobolka Bari.
Madaxweynaha dowladda Puntland Dr.C/weli Maxamad Cali Gaas ayaa caawa u hoyanaya degmada Qandala waxaan maalinta beri ah uu kulamo gaar gaar ah la yeelan doonaa odayaasha dhaqanka , ganacsata , waxgaradka iyo weliba Saraakiisha ciidanka ee ku sugan degmada Qandala ee Gobolka Bari.
Hoos ka Dhagayso waraysi ay Idaacadda VOA la yeelatay Madaxweynaha Puntland oo ku sugan Qandala